Doma Vaquera - Noti Caballos | Soavaly Noti
Ny iray amin'ireo fitsipi-pifehezana mahaforona soavaly dia akanjo akanjo cowgirl, izay fifaninanana amin'ny fakany Espaniôla ary ny niandohany dia miverina amin'ny asa nataon'ny Cowboys miaraka amin'ny omby dia. Ny fanazaran-tena izay taloha dia nentina tany an-tsaha izy ireo, izao izy ireo dia nifindra tany amin'ny làlana izay nandinihan'ny mpitsara azy ireo, amin'ny fikasana hanome didim-pitondrana mpandresy.
Sarobidy entana sy toetra mampiavaka ny biby. Amin'ity toerana ity dia hahafantarantsika bebe kokoa an'ity fitsipi-pifehezana ity, amin'ny akanjo fitafiana omby ary hifantoka bebe kokoa amin'izany isika hankafizantsika ireo mampiavaka azy.
Eto no hahitanao ny zavatra rehetra mifandraika amin'izany akanjo lava cowgirl, torohevitra, hevitra, fifaninanana, entana ary lava sns. Azonao atao ny manitatra ny fahalalanao momba io lohahevitra io.
Ny lamboridy dia iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ny fitaovan'ny soavaly satria miankina aminy ny fikirakirana, ...